पाँच वर्षदेखिको एकता प्रयास सफल
काठमाडौँ, फागुन ८ गते । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भाषामा भन्ने हो भने नेकपा (एमाले)सँग एकताका लागि विगत पाँच वर्षदेखि घनिभूत छलफल भइरहेको थियो । र, त्यसैको परिणामस्वरूप दुई पार्टी एकीकृत भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनेको छ ।
कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यो एकीकरणलाई निकै महŒवका साथ हेरिएको छ । हुन त कम्युनिस्ट पार्टीहरूको स्थापना र विभाजनको लामो फेहरिस्त छ । कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएदेखि नै विभिन्न धारमा विभाजित भएको देखिन्छ । रायमाझी धार, तुलसीलाल धार, मनमोहन धार, मोहनविक्रम धार, पुष्पलाल धार हुँदै एमाले धार र माओवादी धारको जन्म भएको हो ।
यी सबै धार एकअर्कामा विलीन हुँदै अहिले एमाले धार र माओवादी धारको मिलन भएको छ । २०३१ जेठ १४ मा झापा र मोरङका क्रान्तिकारीले एकताको निम्ति गरेको अपिल २०३२ मा को–अर्डिनेसन केन्द्रको गठन भएको थियो । वि.सं. २०३५ पुस ११ मा एक सम्मेलनबाट नेकपा (माले) गठन भयो । २०४७ पुस २२ मा नेकपा (माले) र नेकपा (माक्र्सवादी)बीच एकता भई नेकपा (एमाले) निर्माण भयो । पछि त्यही एमालेमा मानन्धर समूहको एक हिस्सा, २०५० मा तुल्सीलाल समूह, २०५१ मा मसाल, एकताकेन्द्र पनि सामेल भएको थियो ।
एमालेमा विभिन्न समूह सामेल हुने प्रक्रिया चलिरहेकै बेला २०५४ मा आफँै विभाजित भयो । छुट्टै माले बन्यो । पछि २०५८ मा मालेले एमालेसँग एकता गरे पनि एउटा समूह यसमा आएन । यसरी विभिन्न धार र समूह मिलेर बनेको एमाले र माओवादी केन्द्रसँग एकता भएको छ ।
यता २०४७ मा नेकपा (मशाल), चौ.म., सर्वहारावादी श्रमिक सङ्गठन (रूपलाल) र विद्रोही मसाल (बाबुराम) मिली नेकपा (एकताकेन्द्र) निर्माण भएको थियो । एकताकेन्द्रले ‘संयुक्त जनमोर्चा’को नामबाट २०४८ सालको चुनावमा भाग लियो । नौ सिटमा विजयी पनि भयो । तर, रिमको सदस्य भएकाले संसदीय राजनीतिको कार्यनीति परिवर्तन गर्न दबाब दिएको थियो । त्यसपछि २०४९ मा एकता महाधिवेशन गरी माओवाद सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गर्दै जनयुद्धको नीति पारित ग¥यो । जनयुद्ध र जनसङ्घर्षमा मतान्तर भएपछि २०५१ मा निर्मल लामा समूह अलग भएर अर्को एकताकेन्द्र गठन भयो । त्यसपछि प्रचण्डहरूले बैठकबाट पार्टीको नाम परिवर्तन गरी नेकपा (माओवादी) बनाउनुभयो र २०५२ साल फागुन १ बाट जनयुद्ध आरम्भ भयो ।
१० वर्षसम्म सशस्त्र सङ्घर्ष गरी २०६२÷६३ को जनआन्दोलन हुँदै गणतन्त्रसम्मको यात्रा माओवादी केन्द्रले तय गरेको छ । त्यसबीचमा एमालेबाट विभाजित भएका मालेबाट केही नेताहरू माओवादीमा प्रवेश भयो । २०६५ मा एनके प्रसाई नेतृत्वको नेकपा (मालेमा) पनि सामेल भयो । २०६६ मा नारायणकाजी श्रेष्ठहरूको नेकपा (एकताकेन्द्र) सँग एकता भई एकीकृत नेकपा (माओवादी) बनाइयो । पछि मोहन वैद्य ‘किरण’, डा. बाबुराम भट्टराई, नेत्रविक्रम चन्द, परी थापा, मातृका यादव लगायतका नेता अलग भई अलगअलग समूह बनाए ।